DEG-DEG: Virgil Van Dijk Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Dhaawac Kasoo Gaadhay Ciyaartii Chelsea Ee Finalka FA Cup Iyo Haddii Uu Seegayo Finalka Champions League - Laacib
HomeWararka CiyaarahaDEG-DEG: Virgil van Dijk Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Dhaawac Kasoo Gaadhay Ciyaartii Chelsea Ee Finalka FA Cup Iyo Haddii Uu Seegayo Finalka Champions League
DEG-DEG: Virgil van Dijk Oo Faahfaahin Ka Bixiyey Dhaawac Kasoo Gaadhay Ciyaartii Chelsea Ee Finalka FA Cup Iyo Haddii Uu Seegayo Finalka Champions League
Difaaca Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa shaaciyey in uu dhaawac ka dareemay muruqa lugta bilowga ciyaartii finalka FA Cup ee ay rikoodheyaasha kaga badiyeen Chelsea, taasina keentay in la beddelo markii uu awoodi waayey inuu ciyaarta sii wato.
Xiddiga reer Netherlands oo qaab ciyaareed cajiib ah muujinayey xilli ciyaareedkan ayaa la beddelay daqiiqaddii 90aad ka hor intii aan ciyaarta lagu darin 30 daqiiqadood oo dheeraad ah.
Kursiga kaydka ee Wembley Stadium ayuu ka daawanayay waqtigii dheeraadka ahaa, halka rikoodheyaashiina uu taagnida ku dhamaystay.
Liverpool ayuu sidoo kale ka dhaawacay Mohamed Salah oo garoonka ka baxay daqiiqaddii 33aad isaga oo muruqa lugta midig wax ka noqday, isla markaana awoodi waayey in uu xataa dhamaysto qaybta hore ee ciyaarta.
Jurgen Klopp oo ay kooxdiisa laba ciyaarood oo Premier League ah iyo finalka Champions League oo ay Real Madrid la ciyaari doonaan dhamaadka bishan May ay u hadhsan yihiin, ayaa uu walaac badan ku abuuray labada dhaawac ee caawa iyadoo horena uu uga maqnaa Fabinho oo ku dhaawacmay ciyaartii Aston Villa ee Salaasadii.
Kaddib guushii FA Cup, Virgil van Dijk ayaa warbaahinta la hadlay oo faahfaahin ka bixiyey dhaawaciisa, waxaanu yidhi: “Waxa aan rajaynayaa in aan caadi ahay, laakiin waynu hubin doonaa. 20 daqiiqadood markii ay ciyaartu socotay ayaan xanuun ka dareemay kuraanta oo i ciirtay. Waan ku ciyaaray laakiin ma aanan qaadan karayn khatar. Waxa aan rajaynayaa in aan fiicnaan doono.”
Liverpool ayaa baadhitaan ku samayn doonta dhaawaca Van Dijk oo sawirro laga qaadi doono Axadda, waxaase la filayaa in aanu noqon mid ka joojin kara ciyaarta finalka Champions League ee Real Madrid ee May 28.